XASAN SHEEKH: “Waa in la Ansixiyo Sharciga La Dagalaanka Argagaxisada” |
XASAN SHEEKH: “Waa in la Ansixiyo Sharciga La Dagalaanka Argagaxisada”
buy Vigora online, clomid online. — Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka codsaday xildhibaannada baarlamaanka Somalia inay si deg-deg ah u ansixiyaan sharciga la dagaalanka argagixisada.
Xasan Sheekh ayaa ka hadlay baahida loo qabo in la helo wixii lagula dagaalami lahaa kooxaha argagixisada ah, isagoo xusay in taasi ay ugu horreyso ansixinta shuruucda la dagaalanka argagixisada oo horyaalla baarlamaanka Soomaaliya.
“Hab-dhaqanka cusub ee bulsho waa inaan u leenahay diyaar-garow, shuruucdu waa muhiim maanta ninka dambiilaha ah ee dadka ku dila iyo kan argagixisada ah ee baarlamanka weeraraya aan isku sharci ku xukunnaa, waana muhiim in qofka markii la horkeeno sharciga uu leeyahay xeer iyo nidaam loo cuskanayo xukuunkiisa,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh oo xildhibaannada la hadlay.
Sidoo kale, madaxweyne Xasan wuxuu sheegay in argagixisada loo helo sharcigii aan ku qaadi laheyn marka gacantga lagu soo dhigo, taasina ay ku xiran tahay in la meel-mariyo sharciga la dagaalanka argagaxisada.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xaqiiqay in sharciga la dagaalanka argagixisada uu aad muhiim u yahay; isagoo ka codsaday inay da-dajiyaan ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bil ka hor la hor-geeyay sharcigan oo ah mid la doonayo inay ka doodaan dabadeedna cod u qaadaan, inkastoo xildhibaannadu aanay wax dood ah weli ka yeelan.
Dhanka kale, madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku sheegay inuu si aad ah uga xun yahay weerarkii ay Al-shabaab ku qaadday golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku dhinteen askar isugu jira kuwa dowladda iyo AMSIOM.
– See more at: http://hiiraan.com/news/2014/Jun/wararka_maanta4-46873.htm#sthash.ClVuwb0X.dpuf